एसईओ लेखापरीक्षा लागतमा के समावेश छ?
चाँडै वा पछि, प्रत्येक व्यवसाय मालिकले एसईओ लेखा परीक्षा प्रदर्शन गर्ने महत्त्वलाई मान्यता दिन्छ. हाम्रो आजको लेखमा, हामी एसईओ लेखापरीक्षण वास्तवमै के बुझ्दछौं. साथै, हामी निर्धारण गर्न चाहन्छौं कि तपाइँलाई एक साथ साथै यसको लागतलाई विचार गर्नुहोस्. त्यसैले, बिन्दुको नजिक. एसईओ लेखापरीक्षा लागतमा के समावेश गरिएको छ भनेर हेर्नुहोस्.
एसईओ लेखा परीक्षा: How Does It Work?
एक परम्परागत रिपोर्टको विपरीत, एक एसईओ लेखापरीक्षा मार्केटिङ उद्देश्यका लागि मात्र गरिन्छ.
एक राम्रो तरिकाले गरे एसईओ लेखापरीक्षाले तपाईंको वेबसाइट, व्यक्तिगत वेब पेजहरू र समग्र ट्राफिकमा राम्रो जानकारी दिन्छ. सेमील्ट विशेषज्ञहरूले सिफारिस गर्छन् कि तपाइँ यस्तो चेक क्वाटरमा वा हरेक परियोजनाको सुरुवातमा कार्य गर्दछ.
वेबसाइट को लेखा परीक्षा को प्रमुख लाभ
तपाईंको संसाधन को खराब प्रदर्शन क्षेत्रहरु लाई पहिचान गर्न को लागी
एसईओ आडिट एक उत्तम तरीका खोज गर्न को लागी तपाईंको साइट को किन भाग राम्रो तरिकाले काम गर्दछ र जो को आवश्यकता को बढावा दिन को लागि. तपाईं राम्रो क्षेत्रहरू खण्डमा रहन सक्नुहुन्छ जबकि साइट को कमजोर क्षेत्रहरु लाई सुधार गर्न को लागी तपाईंको रैंकिंग को बढावा दिन को लागी. पूर्ण रिपोर्ट, गहिरो डेटा विश्लेषण, र उपयोगी सिफारिसहरू प्राय: एसईओ लेखापरीक्षाको लागतमा समावेश छन्. तिनीहरू सबैले तपाईंको साइटको प्रदर्शन सुधार गर्न योगदान दिन्छन्.
यो केवल खोजशब्द रिसर्च भन्दा बढी छ
तपाईंको पृष्ठ-एसईओ एसईओ व्याख्या गर्नुको साथै, एसईओ लेखापरीक्षणले तपाइँको अफ-पेज र टेक्नोलॉजी एसईओलाई पनि विचार गर्नेछ।. पहिलो, पाना पृष्ठ एसईओ मा प्राय: कीवर्डहरू, URL हरूहरू, र मेटा ट्याग विश्लेषणहरू समावेश गर्दछ. जब दुईवटा तपाईंको साइटमैप र वेबसाइट उपयोगितालाई संकेत गर्दछ.
ती व्यक्ति जसले आफ्नै मार्फत ती सबै पक्षहरूको विश्लेषण गर्न योजना बनाउनुपर्छ भनेर सम्पूर्ण प्रक्रियामा घण्टा लाग्न सक्छ।. सायद, तपाईंसँग यसको लागि न त समय छ र न कुनै इच्छा छ. यसको मतलब तपाईं कसैलाई चाहिन्छ जसले तपाईंको लागि यस्तो अडिट गर्न सक्नेछ. व्यावसायिक एसईओ कम्पनीहरूले तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्छन्.
खोज इन्जिनहरूमा फेला पर्ने सम्भावना राम्रो छ
एसईओ लेखा परीक्षा वास्तवमा साइट को साइट मा बढाने को लागी क्षेत्रहरु लाई खोज को लागी एकदम कम लागत हो।. त्यसपछि तपाइँ ती एन्टिन्टिन्सनहरू तपाईंको विज्ञापन र प्रायोजित पोष्टहरू भन्दा निःशुल्क वा कम मूल्यको लागि गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँबाट, तपाईं आफ्नो दर्शकहरूलाई व्यवस्थित रूपमा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ. तपाइँ आफ्नो खोज Google खोजमा धक्का पुर्याउनुहुन्छ, तपाईंको संसाधन अधिक आँखाहरूमा अगाडि मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ. गुगल खोज नतिजाहरूको पहिलो पृष्ठमा प्राप्त गर्नु भनेको थप मानिसहरूले तपाईंलाई देख्नेछ.
तपाईं निश्चित खोजशब्द वाक्यांशहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने निश्चित छैन? चिन्ता पर्दैन! एसईओ आडिटले तुरुन्तै तपाईंलाई बताउनेछ. तपाईंको खोजशब्द वाक्यांशहरू परिवर्तन गर्न यो सम्भव छ जब तपाईं आफ्नो लक्षित दर्शकहरूको अगाडि निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ.
तपाईंको एसईओ लेखा परीक्षा प्राप्त गर्न को लागि यो उच्च समय छ!
आफ्नो वेबसाइट को लागि एसईओ लेखा परीक्षा ले संधै एक महान निर्णय हो. तपाईंले बुझ्नु पर्छ कि सम्पूर्ण प्रक्रिया तपाईको साइट खोजशब्दों भन्दा अधिक गहिरो छ. तपाइँले लक्षित दर्शकहरूको लागि सही कुञ्जी वाक्यांशहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने, एसईओ लेखापरीक्षणले तपाईंलाई बताउनेछ कि उनीहरूलाई सही राखिएको छ. यो एक उत्कृष्ट मौका सुनिश्चित गर्न को लागी उच्च गुणवत्ता वाला कडियाँ तपाईंको साइट मा फिर्ता इष्टतम राशि हो.
नियमित आधारमा एसईओ लेखापरीक्षा प्रदर्शन गरेर, तपाईं आफ्नो प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहन सक्षम हुनेछ. अधिक छ, एसईओ लेखा परीक्षा सामाजिक मीडिया मा आफ्नो रैंकिंग को बढावा दिन को लागि एक सही तरीका हो किनकी यसले तपाईंको संभावित ग्राहकहरु लाई तपाईंलाई कसरि खोज को आवश्यकताहरु को बारे मा सबै आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ जब Source .